Ungayisebenzisa kanjani iphasiwedi Grub2 | Kusuka kuLinux
Ungayisebenzisa kanjani iphasiwedi i-Grub2
Kunezindlela eziningana zokuvikela ifayela le- Grub ekusatshalalisweni kwethu esikuthandayo. Ngizamile ikakhulukazi nge- lokhu okuhlukile futhi nge Lokhu okunye, kodwa akekho ongisebenzele. Mhlawumbe bengilahlekelwa okuthile futhi kuyihlazo, ngoba lapho kukhiqizwa amaphasiwedi ngeHash, into iphephe kakhudlwana.
Kepha, noma kunjalo, ngizokukhombisa eyodwa engisebenzele izimangaliso, futhi engibuza igama lomsebenzisi nephasiwedi lapho ngizama ukuhlela i- Grub. Izinyathelo zilula:
1- Sihlela ifayela /etc/grub.d/00_header:
2- Sengeza imigqa elandelayo ekugcineni:
Endabeni yami, ngakhetha isidlaliso sami njenge-superuser, kepha ungakhetha noma yini oyifunayo. Uma sifuna, singangeza abasebenzisi abaningi, futhi kungabonakala kanjena:
Songa futhi sivuselele i- Grub.
Siqala kabusha futhi lapho sizama ukuhlela ifayela le- Grub ngokhiye "futhi" Izosicela igama lomsebenzisi nephasiwedi 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungayisebenzisa kanjani iphasiwedi i-Grub2
umphathi we-fucking kusho
Phendula othandweni oluthandayo
Angazi ukuthi bewazi yini ukuthi esikhashaneni esedlule ngangeze ngqo leyo ndlela ku-GUTL Wiki. Ngokubona kwami, into elandelayo ethokozisayo ongayenza isifundo sokuthi iphasiwedi ingavikela kanjani ukufakwa kwemenyu ethile ye-GRUB. Ngabe ujabulile? 😉
Eqinisweni kungenziwa. Ngizokugcina engqondweni ..
Sawubona, uma kusebenza faka inketho ye-hash.
Ukuze ihlanzeke futhi isebenze.
Indlela yokukwenza injena.
Kufanele ungeze imigqa elandelayo ekugcineni kwefayela /etc/grub.d/40_custom
set superusers = »umsebenzisi»
iphasiwedi_pbkdf2 yomsebenzisi futhi nansi yonke i-hashi eyenziwe yi-grub-mkpasswd-pbkdf2
gcina bese usebenzisa i-update-grub
futhi voila =)
Hewu! Siyabonga ngethiphu 😉
Ngiyabonga, ekugcineni ngikutholile ebengikufuna.
Kungisebenzele. Ngiyabonga kakhulu 🙂
Vele ukucebisa okuveziwe. Ngenkathi indlela ibukeka ilula ukuyisebenzisa, ngicabanga ukuthi, ingilungise uma nginephutha, isengozini kalula.
Isivivinyo: Ukube bengizosebenza bukhoma, bengingafaka i-disk bese ngifunda ifayela okukhulunywa ngalo, ngoba lisembhalweni ocacile. Ngemininingwane oyitholile, ungahlela i-grub ukuthola ukufinyelela kwezimpande.
Ngilindele ukuphawula kwakho.
I-Orta: itimu ye-Gtk enhle ngokwezifiso
Shintsha iphasiwedi yempande ku-Debian / LMDE